Adiga oo kula jira .... SolydXK | Laga soo bilaabo Linux
Adiga oo… SolydXK
Daabacadaha rasmiga ah ee LMDE KDE iyo Xfce waa la joojiyay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu mahadceliyo Schoelje shaqadii cajiibka ahayd ee uu ka dhex qabtay bulshadeena. Naso oo hubi in dadaalkiisa, iyo jawaabihiisa, aan laga fiirsan.
Aniga iyo Schoelje aad baan u wada hadalnaa. Tallaabada xigta ee macquul ah ee LMDE KDE iyo LMDE Xfce waa in si rasmi ah loo sii daayo iyadoo la adeegsanayo baaritaan tayo leh oo ku habboon. Maaddaama dalabku aad u hooseeyo kooxduna ay aad u kala fidsan tahay, waxaa lagu samayn karaa oo keliya iyada oo loo marayo daabacaadda bulshada (kuwaas oo rasmi ah, laakiin kuwan wax ballanqaad ah laguma samayn jadwalka sii deynta)
Markii aan u soo bandhigay inaan sii wado mashaariicdan, Schoelje wuu ka warwareegay oo wuxuu ku dhammaaday hoos u dhac. Sida daabacadaha rasmiga ah ee 'Mint' wuxuu lumiyay awood uu u siidaayo markasta oo uu doono iyo had iyo jeer sida uu doono, si uu u soo bandhigo ISO-yada si guud iyada oo aan la raacin Tayada Tayada iyo in qaar ka mid ah go'aamadiisa naqshadeynta dib loo rogi lahaa. Ugu dambeyntiina waxay u timid inay xiiseyneyso inuu raaco aragtidiisa ama wax u qabto habka Mint. Waxaa jira faa'iidooyin iyo qasaarooyin badan oo halkan ku xiran waana ixtiraamayaa go'aankaaga. Schoelje wuxuu hada diirada saarayaa qaybinta cusub ee loogu magac daray SolydXK.
Fred waa dayactiraha daabacaadda ugu weyn ee KDE (midka ku saleysan Ubuntu) wuxuuna hadda sidoo kale isku xirayaa LMDE Cinnamon iyo MATE sii deynta iyada oo la socota Cusboonaysiinta Xidhmada 6. Wuxuu mari doonaa daabacaadda LMDE KDE iyo Xfce iyada oo loo sii marin doono QA waana la sii dayn doonaa. rasmiga ah ee bulshada.
Wax badan ayaad ka maqli doontaa Fred goor dhow inkasta oo ay meesha naga baxday waxaan u rajaynayaa Schoelje sida ugu fiican.
Kuwaasi waxay ahaayeen ereyadii Clem Lefebvre, hoggaamiyaha Linux Mint. Maanta, 1-da Maarso, Schoelje wuxuu sii daayaa SolydXK ISOs-kii ugu horreeyay.
Dhinaca SolydK, oo leh deegaanka KDE waxay la yimaadeen Firefox, Thunderbird, VLC, Amarok, PlayOnLinux iyo Libreoffice. Iyo SolydX kale oo leh Xfce, waxay la timid isla laakiin Abiword iyo Gnumeric (in kastoo Libreoffice lagu rakibi karo) iyo Exaile halkii laga dhigi lahaa Amarok.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Adiga oo… SolydXK
Waxaan ku sumoobay gnumeric iyo abiword
laakiin kuwaa waxay ku rakibaan 1 daqiiqo
Dhibaatooyin badan oo waaweyn ayaa lumiya horumariyayaal badan.
Runtii waan ka helay isku dhafka barnaamijyada ay Solyd sameyso, waxay mudan tahay dhadhan 🙂
Ma fahmin sababta, haddii ay isticmaalaan KDE, ma isticmaalaan KMail .. si kastaba ha noqotee
Thunderbird way kafiican tahay kmail, hadaan kahadalno maareynta koontada outlook.com, aniga xitaa kuuma sheegayo, kmail dhibaato badan ayaan kala kulmay.
Kmail, iyada oo qayb ka ah Kontact suite iyo xiriirka ay la leedahay barnaamijyada kale ee Kde. Lama barbardhigi karo Thunderbird, oo ah kaliya boostada iyo akhristaha RSS.
Sidoo kale, miyaan la joojin Thunderbird?
Sifiican uma arko, inay kuxirantahay nidaamka Kde, barnaamijyo meta ah marka laga reebo inaysan xiriir la laheyn barnaamijyada kale ee qeybinta, ku dar maktabadaha xad dhaafka ah iyo culeyska dhintay, luminta dhamaan wanaagii ay ahaan laheyd doorashada barnaamijyada isku xira oo ay wadaagaan xogta sidoo kalena si fiican ayey u shaqeeyaan.
Sidoo kale waa inaynaan buun buunin, daaqadaha iyo mac, waxaa jira kumanaan barnaamijyo leh kumanaan maktabado kala duwan oo qofna uusan dhiman, taada ayaa la mid ah inaad dhahdo daaqadaha waa inaad ku isticmaashaa aragti haa ama haa xD
Iyo maya, Thunderbird lama joojin.
Marnaba maheli karo in Kmail uu sifiican ushaqeeyo… Thunderbird ayaa halkan aad ugaga horeysa halkan.
Waa taabasho ka dhib badan in la rakibo. Laakiin ku biirista Arkonadi iyo Qt4 waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Laakiin distros waa bilaash sida dadka isticmaala inay doortaan barnaamijyadooda ay jecel yihiin.
Kaalay, distros kale oo badan si aad uga saarto xD
Weligey sifiican ugama shaqeyn karin LMDE KDE, shilal badan ayaa kadhacay Mint KDE oo si habsami leh usocota.
Waxaa jira qaybsi sifiican loo shaqeeyay, wuxuu horeyba ugujiraa nooca 7 Alpha 64 gogol, waan isticmaalay waana mid xasiloon. Waxaa loo yaqaan 'Pear Linux' oo waxaad ka soo dejisan kartaa halkan: http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/02/pear-os-7-alpha-2-64-bit-disponible_28.html
Midkale oo raba inuu heesto "My Way."
Jidkaygu waa wadada adag !!! 😀
Waxay leedahay xulasho wanaagsan oo xirmooyin ah laakiin aniga waxay ila tahay inay tahay distro »wax badan oo isku mid ah»
Distoorkan cusubi miyuu rogi doonaa mise maya? sidee u socotaa
ZTE Grand S LTE: Shirkadda weyn ee Shiinaha